Ciidamada amniga ee Puntland oo howlgallo ka sameeyay Boosaaso – Radio Muqdisho
Ciidamada amniga ee Puntland oo howlgallo ka sameeyay Boosaaso
Ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa howlgal ay sameeyeen waxaa ay ku soo qabteen tiro maleeyshiyaad ah oo ka tirsan kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso waxa ay howlgallo lagu xoojinayo amniga ka sameeyeen xaafadaha ay ka koobantahay Boosaaso, halkaasi oo ay ku soo qabteen tiro dad ah oo lala xiriirinayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Bari Axmednaasir Maxamuud Xasan ayaa ku soo warramay in howlgallada uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga magaalada, isagoo intaa ku daray in saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay saxaafadda u soo bandhi doonaan marka ay soo gabo gabowdo howlgallada iyo baaritaannada lagu kala saarayo dadkii lagu soo qab qabtay.
Ciidamada amniga ee Maamulka Puntland ayaa dadaal ugu jira sidii ay u ciribtiri lahaayeen haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya qeybo ka mid ah gobalka Bari.
Maamulka Ximan iyo Xeeb oo diiwaangelinaya dadka tegaya Cadaado